Sida loo soo dejiyo Fortnite on Android haddii aan la taageerin | Madasha Mobile
Sida loo soo dejiyo Fortnite on Android haddii aan la taageerin
Qolka Ignatius | | Android, Ciyaaraha
Fortnite, oo ay weheliso PUBG, ayaa ah inta badan ciyaaraha ruug -caddaaga ah ee nooca royale dagaalka Taasi waxay gaartay aaladaha mobilada, cayaaraha sidoo kale loo heli karo consoles -ka iyo PC -yada.In kasta oo PUBG Mobile uu leeyahay shuruudo aad u hooseeya oo ku shaqeeya ku dhawaad ​​taleefan kasta ama kiniin, isla sidaas kuma dhacdo Fortnite.
Shuruudaha si aad ugu raaxaysato Fortnite xaaladaha aad bay u sarreeyaan, shuruudaha qaarkood waa inaan buuxinnaa haddii aan rabno inaan ka rakibno Fortnite bogga rasmiga ah ee Ciyaaraha Epic, in kasta oo nasiib wanaag, aysan ahayn habka kaliya. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loogu rakibo Fortnite taleefanka casriga ah ee aan la taageerin Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 Fortnite lagama heli karo Dukaanka Play-ka
2 Shuruudaha ugu yar ee Fortnite ee Android
3 Ku rakib Fortnite rakibiyaha Epic
4 Ku rakib Fortnite ApkPure
5 Ma mudan tahay in lagu rakibo Fortnite taleefanka casriga ah ee aan la taageerin?
Fortnite lagama heli karo Dukaanka Play-ka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaanno waa taas Fortnite lagama heli karo Play Store, inkasta oo ay ahayd waagii hore. Markii Ciyaaraha Epic, abuuraha Fortnite, ay ku jiraan albaab lacag bixin ah nooca mobilada oo ka booday Play Store iyo Apple App Store labadaba, Google iyo Apple labaduba waxay ka saareen bakhaarradooda app -ka.
In kasta oo aan ku jirno Android wax dhib ah kuma qabno inaan sii wadno ku raaxaysiga cinwaankan, sidaas kuma aha iOS, halkaas oo ay ugu wacan tahay xannibaadaha Apple, ma rakibi kartid codsi kasta oo aan laga heli karin App Store, in kasta oo ay u badan tahay inay is beddesho mustaqbalka sababta oo ah dacwadda Epic ee ka dhanka ah Apple taas oo ay ku eedaynayso dambiyada keli -talisnimo ee Dukaanka App.
In kasta oo Fortnite aan laga heli karin Dukaanka Play, dalabka wali waa Waxaa laga heli karaa mareegaha Epic, hore u rakibidda rakibiyihii ay noo diyaarisay.
Marka rakibiyaha la rakibo (hore waa inaan awood u siinnaa ikhtiyaarka ilaha aan la aqoon), wuxuu hubiyaa haddii taleefankayaga casriga ah buuxiyay shuruudaha ugu yar ee looga baahan yahay ciyaarta.
Shuruudaha ugu yar ee Fortnite ee Android
Shuruudaha ugu yar ee Fortnite for Android waa:
64-bit processor (waligeed kuma shaqayn doono processor 32 bit).
Android 8.0 ama wixii ka dambeeya. Tani waa mid ka mid ah xaddidaadaha ugu waaweyn, maaddaama taleefannada casriga ahi ay leeyihiin awood ku filan laakiin waxay ku sii jireen Android 7.0
4 GB RAM xasuusta. Xusuusta badan ayaa ka sii fiican, laakiin waxa ugu yar ee lagu talin karo in cinwaankani u shaqeeyo si xad -dhaaf ah waa tan.
Sawir Adreno 530 ugu yar, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 ama ka dib.
Marka laga reebo shuruudaha koowaad, processor 64-bit ah, inta soo hartay waan ka boodi karnaa oo rakibi karnaa Fortnite taleefankayaga casriga ah, in kasta oo aanaan fileynin in wax -qabadku noqdo kan ugu fiican, wax shirkaddu u dejisay dhowr shuruudood oo ugu yar, si ay u siiso dareere waayo -aragnimo ku filan si ay ugu raaxaysato cinwaankan.
8-ka kulan ee ugu eg Fortnite
Ku rakib Fortnite rakibiyaha Epic
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah soo dejiso rakibiyaha laga heli karo Dukaanka Ciyaaraha Epic Iyada oo loo marayo Xiriirinta taleefanka laftiisa ama iskaanka lambarka QR taas ayaa lagu muujiyey mareegahaas casriga ah.
Markii hore, waa inaan ka hawlgaliney ikhtiyaarka ilaha aan la aqoon xulashooyinka qaabeynta Android. Doorashadan ayaa oggolaanaysa ku rakib barnaamijyada meel kasta, kaliya maahan Play Store. Waxaan dhihi karnaa waxay caqabad ku tahay Google inay ilaaliso badbaadada isticmaaleyaasheeda, caqabad aan sinaba looga gudbi karin macruufka.
Sida loo helo V-Bucks bilaash ah Fortnite sanadka 2021
Markaan rakibno arjiga, waxaan haysannaa ikhtiyaar aan ku rakibno Fortnite iyo Breakers Battle. Waxaan doorannaa Fortnite ka dibna rakibaha ciyaartaan waa la soo dejisan doonaa. Marka la rakibo, tan ayaa hubin doona haddii taleefankayaga casriga ahi ku habboon yahay cinwaankan.
Xaaladeena, waxaan isku dayaynaa inaan ku rakibno Fortnite a Android 7.0 aalad la maamulay oo leh 4 GB oo RAM ah iyo dalabka rasmiga ah ee Epic, habka rakibidda oo ugu dambayn aan awooday inaan sameeyo iyada oo aan wax dhibaato ah ka baxsan waxqabadka, oo aan ka hadalno dhammaadka maqaalkan.
Haddii kale, waxay na tusi doontaa farriin digniin ah, oo nagu wargelinaysa in waxqabadka ciyaarta laga yaabo in wax badan laga tago. Adigoo gujinaya ok, ciyaarta waxay bilaabi doontaa inay ku rakibto dhibaato la'aan aaladda.
10ka hargaha ugu caansan ee Fortnite sanadka 2021
Nidaamkan waxay qaadan doontaa ilaa saacad, maaddaama ay u baahan tahay soo dejinta ciyaarta oo ku dhawaad ​​8 GB ah iyo fulinta hab lagu hubinayo qalabka si loo waafajiyo waxqabadka qalabka.
Ku rakib Fortnite ApkPure
Haddii markii aad gujineyso Ok adoo adeegsanaya qaabkii hore, aysan ka fogeyn arjiga, waa inaan ku dhaqaaqnaa hab kale si aan ugu awoodno inaan ku rakibno Fortnite taleefanka casriga ah ee la jaan qaada. Si tan loo sameeyo, annagu waannu samayn doonnaa adeegsiga bakhaarka ApkPure, bakhaar la isku hallayn karo oo ku filan oo aan wax u dhimi doonin amniga xogta ku kaydsan taleefankeena casriga ah.
100 fikradaha magaca fikradaha Fortnite ee aad jeclaan doonto
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah booqo websaydhka ApkPure y soo dejiso rakibayaasha, tan iyo mareegaha waxaan kaliya ka heli karnaa nuxurka la heli karo, kuma rakibi karno codsiyada taleefanka casriga ah.
Markaan soo dejisanno arjiga, marka la rakibayo, waa inaan bixinnaa oo keliya ogolaanshaha kaydinta, shardiga kaliya ee dhabta ah ee codsigu u baahan yahay inuu soo dejiyo oo rakibo ciyaar kasta ama codsi laga heli karo madalkan.
Marka xigta, waa inaan isticmaalnaa sanduuqa raadinta oo aan galnaa ereyga Fortnite. Marka xigta, waxay na tusi doontaa dhammaan natiijooyinka ku habboon raadinta: Fortnite y rakibaadda Fornite in aan ka soo dejisan karno mareegaha Epic.
Waa inaan nahay guji natiijada koowaad oo dooro Rakibo. Habsocodkan, sida haddii aan si toos ah uga samaynno dalabka rasmiga ah ee Epic, waxay qaadan kartaa qiyaastii saacad, maadaama mar la rakibay, ciyaarta ayaa mas'uul ka ah hagaajinta waxyaabaha ku jira aaladda, taas oo ah, adeegsiga qaabeynta sida ugu hooseysa ee suurtogalka ah. in la ciyaari karo iyada oo aan la helin arrimo wax-qabad dhab ah oo ku saabsan taleefanka casriga ah ee aan si rasmi ah loo taageerin.
Waa inaan maanka ku haynaa in Ciyaaraha Epic ay toddobaad walba cusbooneysiiyaan ciyaarta iyagoo ku daraya waxyaabo cusub, markaa haddii mar haddii aan rakibnay cinwaanka oo ay nagu martiqaadeyso inaan soo dejisanno nooc cusub, waa inaan sugnaa illaa ragga ku jira ApkPure haysato nooca cusub ee la heli karo.
Ma mudan tahay in lagu rakibo Fortnite taleefanka casriga ah ee aan la taageerin?
Marka ciyaarta la rakibo, markii aan maamulo markii ugu horreysay waxaan xaqiijiyey sida casriga ah oo aan si rasmi ah u taageerin meeshii aan ku tijaabiyey, run ahaantii aad bay u shaqaysaa, aad u xun, in ciyaarta lafteeda ayaa iga cayrisay ciyaarta sababtuna tahay daahitaan aad u sarreeya.
Ciyaarta si otomaatig ah ayaa loo habeeyay iyadoo loo eegayo awooda processor -ka, RAM iyo garaafyada dejinta dhammaan qiimayaasha ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Si kastaba ha ahaatee, weli kuma filna ciyaarta inay si habsami leh u socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo soo dejiyo Fortnite on Android haddii aan la taageerin